House Music bụ a genre nke music na-inweta ewu ewu n'ụwa nile, malitere na Chicago na a osisi site na aha nkwakọba na agakarị ojii na Latinos, ụlọ music bụ isi ihe electronic agba egwú nọmba. Ọ n'ihu branched si dị otú ahụ sub Genres miri emi ka ụlọ, na-aga n'ihu ụlọ electro-ụlọ na tech ụlọ na adịkwaghị na top music chaatị dị iche iche na-adịbeghị anya. Ikpe ikpe site ọkụ na-efegharị efegharị nke a genre nke music kere ọ na-emekwa ele ka ụlọ music bụ ebe a na-anọ ga-anọgide na-achịkwa music ụlọ ọrụ ruo afọ na-abịa. Lezienụ anya maka ihe top 10 artists ụlọ music nyere n'okpuru.
Part1. Yolanda Ịbụ Jụụ
1) Yolanda Ịbụ Jụụ:
Mejupụtara Sylvester Martinez na Johnson "Durango ebughibu" Peterson, Yolando Ịbụ Jụụ bụ Australian na gbalaga onye aha ya bụ kwuru na a idaha ke pulp akụkọ ifo. The gbalaga rụkọrọ ọrụ na DCup na remixed ha Hit "Afro Mkpụrụ" na 2009. Mgbe nke ahụ gasịrị ha tọhapụrụ ha otu "Anyị Ọ dịghị Gwa Americano" nke e eduzi Andy Hylton. Nke a mba otu topped chaatị dị iche iche nke ọtụtụ mba. Na-esonụ bụ otu Hits.
Tupu Etiti abalị
Ọsụsọ gba ọtọ
Tijs Michiel Verwest mma mara ya ogbo aha Tiesto a mụrụ na 1969 na bụ Dutch DJ na ndekọ na-emeputa. Na 1994 Tiesto zutere Amy Bink na ọnụ ha kere ha onwe ha labeelu, Black Oghere E na malitere atọhapụ music. O nwetara ewu ewu n'elu ntọhapụ nke ya mpụta mbụ album "m na-echeta" ke 2001 na ẹdude 10 kpọrọ na 5 Hits. Na 2004 ọ tọhapụrụ ya nke abụọ mpụta mbụ "Dị nnọọ Nwee". Ya na-esonụ kpọrọ si mpụta mbụ album natara elu Fim.
Na-egbu egbu Industry
Joel Thomas Zimmerman mma mara ya ogbo aha Deadmau5, akpọ dị ka 'nwụrụ anwụ òké', a mụrụ na 1981 na bụ Canadian music emeputa ihe na ngosi. Otu agadi ngosi track nke Deadmau5 si 1995 resurfaced na Youtube na 2012. Zimmerman tọhapụrụ ya mpụta mbụ album "Get kpụchasịrị" ke 2005. Ọ malitere ya onwe ya ndekọ labeelu "mau5trap" ke 2007. Ọ ndibọhọ Best Electro House DJ Award na Best International DJ Award ugboro atọ. Na-esonụ bụ ya otu Hits.
Armin van Buuren mụrụ na 1976 bụ a Dutch music emeputa, a redio àgwà na a DJ ndị gụsịrị akwụkwọ na iwu ụlọ akwụkwọ na 2003. Van Buuren nwere ya mbụ isi ihe ịga nke ọma na 1995 na na egwu na-akpọ "Blue Egwu" nke na 2000 banyere UK Chart na Nke 18. Na 1999 ọ malitere ya onwe ya labeelu Armind ọnụ na United Kwunyere. Na 2012 na 2013 van Buuren ndibọhọ International Dance Music Awards maka Best Global Record Label. Ya na-esonụ studio albums e ọma natara kwa.
Nick Leonardus van de Wall bụ zuru aha Afrojack onye a mụrụ na 1987 ma bụ a Dutch music emeputa ihe na DJ. Ọ mụtara na-egwu piano na a nwata. Van de Wall malitere DJ'ing na afọ nke 14 na mpaghara pubs na klọb. O wepụtara "na ihu gị na" ke 2007 na natara mba ịga nke ọma. Afrojack e depụtara na 2011 dị ka ọnụ ọgụgụ 7 na DJ Mag Top 100 djs. Ndị na-esonụ otu Hits ya album "Echefu The Okwu" natara mba accolades.
Dị ka enyi gị
Tim Bergling bụ zuru aha Avicii onye a mụrụ na 1989 na bụ a Swedish DJ, ndekọ emeputa ihe na a remixer. Na 2007 ọ banyere na Dejfitts orụ labeelu. Avicci tọhapụrụ "etoju" na 2011 na ulo oru ya n'ime mainstream. Ọ rụkọrọ ọrụ na David Guetta na 2012 na-emepụta na egwu "Sunshine" nke e nominated maka a Grammy Award. Avicci bụ onye nnata nke 2 World Music Awards na 2014. Ya na-esonụ otu Hits akwụ ya azụmahịa ịga nke ọma.
Enwere m ike ị bụ onye
Kpọlie m n'ụra
Ị na-eme Me
Mejupụtara Guy-Manuel de Homem-Christo na Thomas Bangalter, daft punk bụ a French gbalaga onye isi ọjọọ ndị juru The Beach Boys na The Rolling nkume. Na 1996 mmachi banyere na Virgin Records site na nke ha ikikere ha tracks site na ha mmepụta ụlọ ọrụ Daft Trax. Daft punk bụ nnata nke ọtụtụ ukpono na awards gụnyere 2 Grammy Awards ke 2009 na 4 na 2014.-esonụ bụ otu Hits.
Ike, mma, ngwa ngwa, Ike
Sonny John Moore dị mma mara site na ya ogbo aha Skrillex na a mụrụ na 1988. Ọ bụ ihe electronic music emeputa, a na-agụ egwú na a DJ onye e homeschooled ruru ka iji ike emegbu mmadụ. Na 2008 Skrillex malitere arụ na klọb na Los Angeles Area. Moore tọhapụrụ ya mpụta mbụ EP "Aha m bụ Skrillex" ke 2010 ka a free download. Ọ ndibọhọ 2 Grammy Awards na 2012 na 3 na 2013. Gịnị akwụ ya azụmahịa ịga nke ọma ndị na-esonụ Hits.
Kpọpụta ndị Ekwensu
Akpa Of The Year
Robbert van de Corput dị mma mara site na ya ogbo aha Hardwell na a mụrụ na 1988. Ọ bụ a Dutch electro ụlọ na nnukwu ọnụ ụlọ DJ na music emeputa onye malitere ịmụ oge gboo piano na DJ'ing. Na 2003 ya remixing mpụta mbụ e wepụtara na see klọb. Afọ iri gachara Hardwell ulo oru ụwa ya tour akpọ "Abụ m Hardwell". Ọ na-ama erechapụla na-egosi na Jakarta, Singapore, Mumbai, Bangalore, Lisbon na London. Ya Hits ndị na-esonụ.
Onye ọ bụla dị na The Ebe
Steven Hiroyuki "Steve" Aoki mụrụ na 1977 bụ ihe American ndekọ-emeputa, ihe electro ụlọ egwú na music Executive onye nna bụ nchoputa nke ama ụlọ oriri na ọṅụṅụ agbụ Benihana. Ọ tọrọ ntọala ya onwe ya labeelu akpọ "inyoghi inyoghi Mak Record". Aoki na-ebe mara maka atụba achicha na Fans, ya acrobatic ìgwè mmadụ sọọfụ stunts, nọkwa rafts na-agba egwú n'ala na spraying champeenu karama. Ọ akwụ mba tokwara ya na-esonụ remixes.
Darker Karịa Blood
M hụrụ ya n'anya Mgbe i tiri mkpu
Mụrụ Iji nweta Wild
Atụmatụ maka Soundcloud Download Firefox
> Resource> Music> Top 10 House Music Artists na ha Famous Music